प्रियंका चोपडाभन्दा पहिले निकका ७ प्रेमीका यी हुन् - Everest Dainik - News from Nepal
प्रियंका चोपडाभन्दा पहिले निकका ७ प्रेमीका यी हुन्
बलिउड चर्चित अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र उनका ब्याइफ्रेण्ड निकले अहिले खुबै चर्चा पाएका छन् । उनी दुवैबीचको प्रेमसम्बन्धले सामाजिक सञ्जालका भित्ता रंगिएका छन् ।
अहिले निक प्रियंकासँगै भारतमा छन् । केही दिन अघिमात्रै उनीहरुले गोवामासँगै समय विताएका छन् ।
उनीहरुको आन्तरिक कुरा जान्ने धेरैलाई चाँसो हुन सक्छ । मन पर्ने सलिब्रेटीको आन्तरिक कुराबारे चाँसो दिनु स्वभाविक पनि हो । यसैबीच आज चोपडाका २५ वर्षीय ब्याइफ्रेण्ड निकका पूर्व प्रेमीकाबारे चर्चा गर्ने छौं ।
निकको जिन्दगीमा प्रियंका पहिलो केटी होइनन् । योभन्दा पहिले स्टार निकले सात चर्चित महिलासँग प्रेम गाँसि सकेका छन् । प्रियंका अघि निकका सात प्रेमीका यी हुन्
याे पनि पढ्नुस प्रियंका चोपडाः शान्तिदूत भएर पनि भारतीय सेनाको समर्थन गरेको भन्दै अमेरिकामा आक्रोश
माइलीसँग निकको पहिलो भेट सन् २००६ मा एक च्यानलको कार्यक्रममा भएको थियो । त्यति बेला निक केवल १३ वर्षका मात्रै थिए । रोमाञ्चक कुरा केछ भने उनले पहिलो किस माइलीलाई गरेका थिए । एक टिभी च्यानलको अन्तर्वार्तामूलक कार्यक्रममा निकले आफ्नो यो गोप्यता सार्वजनिक गरेका थिए । माइली र निकको ब्रेकअप २००७ को अन्त्यमा भएको हो । उनीहरुबीचको सम्बन्ध किन लामो समय टिक्न सकेन ? यो प्रश्नको जवाफ भने निकले दिएको पाइदैन ।
निकले पन्ध्र वर्षको उमेरमा गोमेजसँग प्रेम गरेका थिए । निकले उनीसँग करिव दुई वर्ष प्रेममा थिए । उनीहरुबीचको प्रेम २०१० मा अन्त्य भयो ।
याे पनि पढ्नुस निक जोनस परिवारसहित भारत आउदै, प्रियंका र निकको इन्गेजमेन्ट पार्टी कहाँ ?
केही वर्षअघि मात्रै निक ‘बिक्टोरिया सीक्रेटु मोडल जर्जिया फलरसँग प्रेममा थिए । तर, उनीहसँग पनि निकको प्रेम धेरै टिकेन ।
२०१६ मा हलिउडमा निक चर्चामा रहे । उनी चर्चामा रहनुको कारण ब्रीटीस अभिनेत्री लिली कलीन्ससँगको डेट । उनीहरु दुवैबीच २००९ सालमा भेट भएको थियो । तर, निकले भने कलीन्ससँग कुनै सम्बन्ध नरहेको भन्दै आएका छन् ।
निक र आलिवियाबीच करीव दुई वर्ष प्रेममा थिए ।
याे पनि पढ्नुस ग्रामी अवार्डमा लगाएको गाउनका कारण ट्रोल भइन् प्रियंका!
यूएस विक्ली रिपोर्टमा छापिएअनुसार १४ वर्ष बढि उमेरकी केट हड्सनसँग पनि निकको अफियर थियो । उनी दुवैबीच २०१५ मा पहिलोपटक भेट भएको थियो । २०१६ मा उनीहरुबीचको चर्चा खूब चुलिएको थियो । तर, यो सम्बन्ध पनि लामो समय टिक्न भने सकेन ।
निकले अस्टे«ेलियन गायिक डेल्टा गुडरेमसँग पनि प्रेम सम्बन्ध राखे । निक र डेल्टाबीच प्रमेहुँदा उनीहरुबीचको उमेर अन्तर ९ वषै थियो । निक १८ वर्षहुँदा डेल्टा २७ वर्षकि थिइन् । तर, उनीहरुबीचको सम्बन्ध २०१७ मा समाप्त भयो । -एजेन्सी
ट्याग्स: Nik, Pryank copada, प्रियंका चोपडा